Home » 托管指南
09.05.2020 Category: 托管指南
Way Fududahay in Laga hadlo arrimaha farsamada iyadoo la isticmaalayo erayada，泽瓦拉达，伊约萨瓦拉达
Taageerada wada sheekeysiga ayaa sidoo kale ka fiican e-maydka feker ahaan，sababtoo ah（waxay sida caadiga ah）ku dhibeysaa dhibaatooyinkaaga。 Halka emailka ama habka saxda ah，Waxay Qaadaneysaa saacado iyo xitaa maalmo si loo xalliyo hal arin yar.
Labadii bilood ee la soo dhaafay，waxanan soo baxay oo a a la xiriiray shirkadaha 20 + martigelinta iyagoo adeegsanaya nidaamyada ay ku nool yihiin.
2 Taageero Soodhaw Live Live喇嘛hayo
Waxaan booqday shabakad kasta oo marti gelisa shirkadaha martigelisa，waydiisatay taageerada iyada oo adeegsanaysa nidaamka sheekaysiga ku nool，waxayna qoreen waayo-aragnimadayda khariidad。西多（Sidoo）羽衣甘蓝，瓦格蒂加（Waqtiga）苏加坦卡（Uasho）.
虚拟主机Tirada Isku daygaAvg。 Waqtiga sugaMa Qanacsan tahay？aflagaada
A2托管 3 – Jawaab degdeg啊，su’aalaheyga waxaa laga颚木湾si xirfad leh。 Dhibaatada guud ee guud.
Arvixe 1个 6分28秒 Awood uma lihin在y gaarsiiyaan shaqaalaha taageerada iyagoo ku sheekeysanaya中。 Nidaamka ayaa codsaday在aan u diro电子邮件ahaan中。 Eeg sawirka-2（hoos）oo tixraac啊.
蓝主机 1个 2分2秒 Sheekada Live live演唱会现场直播。 Eeg sawirka-3（hoos）oo tixraac啊.
CoolHandle 1个 8 Taageerada和田sheekeysiga喇嘛bixinayo.
范式至关重要 1个 – Taageerada和田sheekeysiga喇嘛bixinayo.
Dot5托管 1个 32秒 Sheekada Live live演唱会现场直播。 Sidoo Kale，xusuusnow in dadka istmaala ay u baahan yihiin inay galaan kahor intaanay helin caawimaada DreamHost taageerida sheekada.
DTS网 1个 20秒 Jawaabta degdega ah-maaha mid aad ugu faraxsan taageerada aan helay。 Waayo-aragnimo caadi ah.
幽灵 2 11秒 Jawaab degdeg啊，su’aalaheyga waxaa laga颚木湾si xirfad leh。 Dhibaatada guud ee guud.
去吧爸爸 1个 15秒 Ka heli karin badhanka wada sheekaysiga tooska ah goobta GoDaddy，laakiin waxay bixiyaan laba lambar oo maxalli ah（马来西亚）si ay u wacaan。 Waxaan isku dayay mid ka mid ah lambarada nambarkeygana waxaa laga soo qabtay ilbidhiqsiyo 10. Nasiib darrose，dhibaatooyinkaygu waxay ahaayeen kuwo aan xallin ka dib daqiiqadihii 10 ee taleefanka。 Shaqaalaha taakuleynta aad ugama aysan aqoonin蜡soo saarkooda； Aakhirkii waan是taagay oo waan soo afjaray taleefanka.
GoGetSpace 1个 10秒 Kaliya taageerada iibka ayaa laga heli karaa iyadoo la adeegsanayo chat live，laakiin shaqaalaha taageerada ayaa ahaa mid waxtar leh oo aqoon leh。 Dhibaatada guud ee guud.
绿极客 1个 20秒 Jawaab degdeg啊，su’aalaheyga waxaa laga颚木湾si xirfad leh。 Dhibaatada guud ee guud.
主机颜色 1个 8分5秒 Waqti dheer oo sugitaan啊。 HostColor wuxuu isticmaalaa Skype halkii uu ka heli lahaa nidaam wada-hadal啊oo toos啊。 Isticmaalayaasha waxay u baahan yihiin inay ku daraan midabka Laambe ee Skype ka hor inta aan la xidhiidhin.
HostGator 4 4分钟 Awood uma lihin在y gaarsiiyaan shaqaalaha taageerada iyagoo ku sheekeysanaya中。 Nidaamka ayaa codsaday在aan u diro电子邮件ahaan中。 Eeg sawirka-4（hoos）oo tixraac啊.
HostMonster 1个 4分20秒 瓦赫提加·贾巴阿布·塞林塔·麦克古尔啊，苏阿阿拉哈·卢加·贾巴阿贝xirfad ahaan。 Guud ahaan khibrad fiican.
HostPapa 1个 3秒 Jawaab degdeg啊，su’aalaheyga waxaa laga颚木湾si xirfad leh。 Dhibaatada guud ee guud.
网页 1个 1分10秒 Mudo yar ayaa loo qabtay si loo helo颌骨，laakiin shaqaalahooda taageeradoodu waa kuwo aad u fiican oo caawimaad leh。 Guud ahaan khibrad fiican.
SiteGround 1个 30秒 Jawaab degdeg啊，su’aalaheyga waxaa laga颚木湾si xirfad leh。 Nidaamka taageerida sheekada wanaagsan（fiiri shaashadaha hoose）iyo shaqaalaha aadka u taageera。 Dhibaatada guud ee guud.
WebHostFace 2 25秒 Jawaab degdeg啊，su’aalaheyga waxaa laga颚木湾si xirfad leh。 Dhibaatada guud ee guud。 WebHostFace ay ku soo dallacayso wax ka yar $ 2 / mo，shirkaddu waxay igu la yaabtay taageerada ay ku nool yihiin nolol fiican.
WP马达 2 2秒 Sanduuqa lagu sheekeysto ayaa soo baxaya ka dib marka la eego tirooyinka 3 waxaad ku jirtaa goobta。瓦克斯（Waxaan）颚骨degdeg ah ka helay sanduuqa lagu sheekeysto，su’aalahaygana waxaa laga颚甲湾xirfad ahaan。 Xasuusnow，si Kastaba ha ahaatee，dadka istmaala waxay u baahan yihiin inay galaan xisaabtooda WP Motor si ay u helaan taageero farsamo.
Imtixaankan，Waxaa Jira Waxyaabo，sida run ahaanshaha iyo xirfadaha wada xiriirka，oo aanan garan karin oo aan qiimeyn u sameyn karin.
Mid ka mid ah xubnaha shaqaalaha ee InMotion Hosting Waxay arkeen arrin suurtagal ah oo la xidhiidha xisaabteyda（inaanan ogayn oo uu iska indho-tiray）inta lagu guda jiray fadhigeena wada-xaajoalka x.
WP Motor waxay通过电子邮件向您发送电子邮件在arrimahayga la xaliyay的malal dambe si loo hubiyo.
Iyo，shirkadaha qaar，waad dareemi kartaa inay si wanaagsan diyaar ugu yihiin很快就会收到dhoweynayaan weydiimaha tooska ah ee sheekada。 Tusaale ahaan，badhanka wada sheekaysiga tooska ah waxaa laga heli karaa bogga ugu sarreeya bogagga shabakadda’BlueHost’。 Isku mid ayaa loogu talagalay InMotion Hosting，WebHostFace，Host1Plus，HostPapa，Hostgator，iyo SiteGround.
Waxyaabahan yar ya waa muhiim laakiin lama koobi karo oo laguma qiimeyn karo shaxda kore.
Taageero Soodhaw Live Live喇嘛hayo
Ka hor inta aanad dhicin wax gunaanad ah，Waxaa jira laba arrimood oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso：
Waxaan ku noolahay马来西亚，saacadda GMT +8。Waqtiga joogtada ah ee xiriirka ah ee tijaabadan waa 2 illaa 5 galabtii，taas oo ah habeenboolka Maraykanka。 Uma maleynayo inay tahay cadaalad ah in la filo taageerada tooska ah ee ku noolaanshaha aqalka habeenkii-gaar ahaan haddii aad la macaamilayso shirkadaha martigelinta yar.
Sheekada Live Live现场直播，现场直播，现场直播，现场直播，现场直播。 Inta badan，dadka istmaala waxay heli karaan taageerada iibka kadib电子邮件，telefoon，iyo warbaahinta bulshada。 Marka Laga reebo GoDaddy kiiskan，ayaan weli isku dayin taageerada telefoonka ee tijaabadan.
Wixii A2托管-Tani waa Waxa Lori ii sheegey ka dib markii ay akhristay oo edebtay我的帖子
Waxaan isticmaalaa A2托管oo marwalba电子邮件ayaan u diraa。 Waligey dhibaato kamaan鹤林inay DIB iigu洙laabtaan daqiiqado gudahood，laakiin waligey马安鹤林dhibaato ubaahan在巴丹OO gadaal伊予gadaal啊waxaan ubaahanahay wadahadal TOOS啊，sidaa darteed taasi waxay xiisoülaheyd inay ahaayeen maroojisid的TAA.
图片1：Ma Aanan awoodin inaan gaaro taageerada A2 Marti-gelinta iyada oo loo marayo wada-hadalka tooska ah waxaana lagula talinayaa in aan diro emayl bedel ahaan.
图片2：Ma jirin cid ka颌骨tay codsigeyga sheekeysiga ee B3。 Guddiga wada hadalada ayaa i weydiiyay emailkayga.
图片3：BulwarkHost Nidaamka sheekeysiga ku noolaanshaha ayaa ahaa xayiraad markii aan soo gaadhay.
图片4：Dhammaan waaxyaha HostMetro waa markii ugu horeysey ee lala xiriiro.
Waxaan rajeynayaa在boostadani ay faa’iido u leedahay kuwa raadinaya marti-geliye websaydh中。 Hubso inaad sidoo kale ka fiiriso dib-u-eegista martigelinta mugdi-ahaaneed ee faahfaahin dheeraad ah.
Wixii taageero ah ee martigelinta – Waxaan deurbidayaa joornaalo nololeed wicitaanada taleefanka maxaa yeelay:
Wixii taageero ah ee martigelinta – Waxaani uksbidayaa joornaalo nololeed wicitaanada taleefanka maxaa yeelay:
Wixii taageero ah ee martigelinta – Waxaan derbidayaa joornaalo nololeed wicitaanada taleefanka maxaa yeelay: